Sawirro: Dowladda Sacuudig Oo Ogolaatay in Kaniisado Laga Dhisayo Dhulka Bilaadul Xarameyn. – Shabakadda Amiirnuur
May 5, 2018 9:49 am by admin Views: 128
Kadib booqashooyin ay magaalada Riyaadh ku tageen Baadariyaal katirsan Vatican-ka ayay kulamo kula qaateen mas’uuliyiinta ugu sarraysa Sacuudiga oo uu kamid yahay Salmaan Bin C/casiis iyo wiilkiisa waxayna labada dhinac kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah.
Cardinal oo ah Baadari katirsan maamulka Vatican ayaa sheegay in maamulayaasha sacuudiga ay isku afgarteen ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada iyo in Kaniisado laga hirgeliyo dhulka Xarameynka.
Jean-Louis Tauran oo ah madaxa wadahadalka diimaha ugu magacaaban Vatican-ka ayaa Sacuudiga ugu mahad celiyay wax uu ugu yeeray Furfurnaan dhanka diinta ah oo ay sameeyeen iyo in ay madaxa uga istageen faafinta islaamka xagjirka ah sida uu hadalka u dhigay.
“Boqor Salmaan ayaa xafiiskiisa qasriga Alyamaamah ku qaabilay wafdi heer sare ah oo ka socday dowladda Vatican-ka waxayna ka wada hadleen wadahadalka diimaha,isdhaafsiga aqoonta iyo ka hortagga xagjirnimada”ayaa lagu yiri war ay faafisay wakaaladda wararka sacuudiga.
Max’med Bin Cabdi Kariim Alciisa oo ah madaxa Ururka Raabidada caalamka islaamka horayna usoo noqday wasiirka cadaaladda Sacuudiga ayaa wafdiga Vatican-ka usaxiixay heshiis dhigaya in Kaniisado laga dhiso dhulka Xarameynka ee Sacuudigu maamulo.
Jean-Louis Tauran oo kulanka kadib warbaahinta lahadlay ayaa ku faanay in wax uu ugu yeeray muwaadiniinta Kirishtaanka ee Sacuudiga ku nool ay heli doonaan Kaniisado ay cibaado gaaleed ugalaan isagoo horumar ku tilmaamay isbedelka dhanka maamulka ah ee Sacuudiga ka hana qaaday.